Ndiri mukomana ane makore 26 okuberekwa, ndakambonyorera kuchirongwa chino ndakasangana nematsotsi . . . | Kwayedza
Ndiri mukomana ane makore 26 okuberekwa, ndakambonyorera kuchirongwa chino ndakasangana nematsotsi . . .
25 Nov, 2016 - 00:11	 2016-11-24T08:53:54+00:00 2016-11-25T00:00:44+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 okuberekwa, ndakambonyorera kuchirongwa chino ndakasangana nematsotsi saka ndinodawo vari pachokwadi. Ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 20 akanaka, mutsvuku ane chimiro chakanaka nekuti ini ndakanaka. Ngaave anonamata kuPHD Ministries, anogeza uye asina hasha nechirwere. Mhandara yakazara iri muHarare chete ngaindibate pa0715 060 792 asi vakadzi vevanhu musazvinetsa henyu, gutsikanai nevarume venyu.
Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvagawo ane mukadzi ane makore 25 – 30 kana ane mwana 1. Handina chirwere uye basa ndinozvishandira. Anoda nezvangu ngaandibate pa0784 922 571.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika asina chirwere. Andifarira ngaandibate pa0773 795 300.
Ndinotsvagavo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 25 zvichidzika ari HIV negative. Ndine makore 30 nemwana mumwe chete. Ndinogara kuNyanga uye ndinozvishandira anoda nezvangu ngaandibate pa0733 211 306.
Makadini? Ndiri murume ane makore 32 nemwana 1, ndiri kutsvaga musikana ari kuda zvekuroorwa ane makore 18 kusvika 26. Ndinoshanda uye handinwe doro kana kuputa fodya. Andifarirawo ngaandibate 0717 757 787.
Ndiri kutsvaga musikana wekuwana ane makore 18 – 26. Andifarira ngaandibate pa0717 757 787.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 31, ndinotsvakawo mudzimai ane makore 28 zvichidzika asina chirwere. Andifarira anondibata pa0774 175 900.
Ndiri mukadzi ane makore 35, ndiri HIV negative uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nekuroora. Ndinoshanda, andifarira anondibata pa0773 070 459.
Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mudzimai ave kuda zvemba ari pachokwadi kana ane mwana 1 aine makore 26 kusvika 29. Nhare yangu 0775 626 693.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana anoda zvemba ane makore 19 kusvika 22. Anoda anondibata pa0778 133 520.
Makadii? Ndinotenda nechirongwa chenyu ndakamuwana musikana wandaida saka vamwe chiregai kufona pa0734 407 377.
Ndiri mudzimai ane makore 43, ndinotsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira. Ndiri HIV positive, nhare yangu 0783 380 708.
Makadii? Ini ndiri musikana ane makore 20 okuberekwa, HIV positive uye ndinodawo mukomana anoda zvekuroora. Kana akambowana akasiya ndinomuda, ini handishande. Andifarira anondibata pa0777 555 988, zvakawanda tozotaura pafoni.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane 27, HIV positive saka ndotsvakawo musikana ari positive ane makore 18 kusvika 22 asingaoneke kuti anorwara nekuti ini ndakasimba. Nhare yangu 0784 771 788.
Ndiri mudzimai ane makore 25 nemwana 1, HIV negative uye ndinoda murume ari pachokwadi anoshanda. Anondida nemwoyo wose anoronga zvinofamba ngaandibate pa0782 252 540.
Ndiri murume ane makore 36 nevana 2, ndinoda mukadzi wekuroora akanaka mutema ane makore 30 zvichidzika. Anoda anondibata pa0771 076 466.
Ini ndinonzi Rumbidzai, ndinogara kwaMutare. Ndine makore 28, ndakasimba ndiri mushava mupfupi munaku. Handirwari uye vana ndine 2. Ndinodawo murume ane makore 30 kusvika 40 ane vana vake akazvipira kunoongorwa ropa. Handidi munhu anonyepa, vane vakadzi musafona zvenyu gutsikanayiwo nevakadzi venyu. Ngaave ane rudo nekuti ini ndine rudo, nhare yangu 0715 938 189.
Ndinotsvagawo mukadzi mupfupi mushava akasimba zviri pakati nepakati, ane makore 26 zvichidzika. Asiri pamushonga ngaandibate pa0773 558 386.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 20. Nhare yangu 0784 739 215, ndinoda anogara muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 29. Ndinotsvakawo shamwarikadzi ine makore 23 kusvika 30. Ndinoda mutete anogeza, asingandidire mari kana ane mwana 1. Ndinobatika pa0776 664 258.
Ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa nevana 2, ndinotsvaga murume wekushamwaridzana naye ari pachokwadi. Ngaave anoshanda ane makore 36 – 42 ekuberekwa. Ndiri HIV positive, anonamata ngaandibate pa0777 072 892.
Ndiri mudzimai ane makore 41, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi akashambidzika uye achine utano. Ari pamushonga sezvo ndiri HIV positive ngaandibate pa0713 037 226.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore18-26 akanaka uye ari pachokwadi. Vanoda ndibatei pa0774 466 682.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane mwoyo wakanaka. Akazvipira kuti tinoongororwa ropa pachena ngaandibate pa0777 801 027.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo shamwarikadzi ine makore 20 kusvika 33, ane mwana kana asina. Andifarirawo ngaandibate pa0776 573 660.
Ndiri mudzimai ane makore 35, ndiri HIV positive uye ndinorarama nekutengesa- tengesa. Ndinoda murume ane makore 40 kusvika 45. Vanoda ndibatei pa0784 438 081.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1, ndinodawo murume ari pachokwadi uye anodawo zvekuti ndienderere mberi nedzidzo. Nhare yangu 0785 275 376.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45. Ndinodawo mudzimai ane makore 30 kusvika 45 akarongeka anofarira zvekurima uye anoshanda muHurumende. Ndine puroti kuMarondera. Nhare yangu
0783 705 227.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba ane makore 18-25. Handidi asinganamate uye anogara kure neHarare. Ngaave ane mari yake. Ndinoshanda pamwe nekugara muHarare, andida ngaandibate pa0776 796 725.
Ndiri murume ane makore 33 nemwana 1, ndinoda mukadzi ane makore 20 – 28 anoda zvemusha. Nhare yangu 0773 869 954.
Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri, ndinotsvaga mudzimai ane makore 24 kusvika 28 ane mwana mumwe chete kana asina. Andifarira ngaandibate pa0776 590 768.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora kana ane mwana mumwe chete ane makore 24 zvichidzika. Nhare yangu 0783 405 198.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 30 ndinotsvagawo murume anondiroora. Ndiri HlV positive, nhare yangu 0785 111 418.
Ndiri murume ane makore 29, ndinodawo musikana kana mukadzi ane makore 25 zvichikwira akanaka uye ane mazirudo nekuti ini ndizere narwo. Ari HIV negative anoda ngaatumire sms pa0773 790 930.
Makadini vabiki vechirongwa? Ndiri mukomana ane makore 26, ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 23 zvichidzika. Akasununguka kunotorwa ropa andida ngaandibate pa0774 120 716.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, ndiri bhiridha uye ndinotsvagawo mukadzi ane vana 2 akanaka. Anogeza anoda zvemba andida anofona kana kutumira sms pa0713 585 364.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33 ekuberekwa nevana 4 uye nemudzimai mumwe chete. Ndinotsvagawo mudzimai anoda kuita wechipiri anofarira zvekumusha. Nhare yangu 0716 533 471.
Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 – 23 asina mwana kana ane mumwe chete. Ngaave ave kuda zvemba anoenda kubasa. Anoda anondibata pa0783 792 159.
Makadiniko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe chete. Ndinoda mukadzi ane mwana 1 kana 2 chete. Andifarira ngaafone pa0736 266 740.
Ndiri mukomana ari kutsvagawo shamwari (penpals). Vanoda ndibatei pa0773 228 562.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 50, HIV+ asi handiratidziki kurwara ndiri pamushonga. Ndinoda murume akaita seniwo akagezeka asinganwi doro kana kuputa fodya. Ngaave ari pachokwadi ane makore 50 kusvika 60 asi vane madzimai avo kwete. Andifarira anondibata pa0785 630 695 chero nguvai zvayo, zvizhinji tozotaura.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore makumi matatu okuberekwa. Ndinotsvagawo shamwari yechirume isina mukadzi inoshanda chero ini ndisingashande. Ndine vana vatatu kumusha kuZaka Jerera. Vanoda vanondibata pa0778 645 750.
Ndiri mukadzi ane makore 41, ndiri kutsvaka shamwarirume yokufambidzana nayo yakavimbika ine makore 43 kusvika 50. Anonwa maARV ngaandibate pa0782 322 188.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 kana 18. Ari pachokwadi ndibate pa0772 464 393.
Ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye anogara muHarare asina chirwere. Akasungunuka kuchaya runhare pa0774 245 512.
Makadiniko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane vana 3 nemakore 36 uye ndinotsvagawo murume ane vana vake ane makore 45 kusvika 65. Vanonyepa kwete, andifarira fona pa0733 604 447.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana 1. Ndinodawo murume ane makore 35 – 45 ane rudo rwakadzama. Anondida ngaandibate pa0784 878 018 chero nguva.